အကြီးမြတ်ဆုံးသောအချိန် (၁၀ နာရီကျော်) CARTOONS စုစည်းမှု (HD 1080p)
Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig, Elmer Fudd, Bosko, Beans ကဲ့သို့နာမည်ကြီးဇာတ်ကောင်များပါ ၀ င်သောဂန္ထဝင်ဘောင်းဘီတိုများကိုခံစားပါ။ Cat, Foxy နှင့် Chuck Jones, Friz Freleng, Bob Clampett, Tex Avery, Frank Tashlin ကဲ့သို့နာမည်ကြီးကာတွန်းကားများ
၈၀ ဗီဒီယိုများအားလုံးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်သောအရင်းအမြစ်မှထုတ်ယူပြီးအရည်အသွေးမြင့်ခေတ်မီကြည့်ရှုခံစားမှုအတွက် 8thManDVD.com မှ ၁၀၈၀ တိုးတက်သောရုပ်ရှင်မြန်နှုန်း ၂၃.၉၇၆ အရည်အသွေးဖြင့်သစ္စာရှိရှိပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ဇာတ်လမ်းတွဲစာရင်းနှင့်အချိန်များကိုဖော်ပြချက်တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်၊ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဗီဒီယိုတစ်ခုသို့တိုက်ရိုက်သွားရန်အချိန်ကိုနှိပ်ပါ။
0:10 The Wacky Wabbit (Bugs Bunny) (၁၉၄၂)
7:32 Duck သို့ Not Duck to Duck (Daffy Duck) (၁၉၄၃)
၁၄:၀၉ ကြောင်ကလေးနှစ်ကောင်ပုံပြင် (၁၉၄၂)
၂၀:၄၆ A Corny Concerto (Bugs Bunny, Elmer Fudd & Porky Pig) (၁၉၄၃)
၂၈:၄၃ Porky's Preview (Porky Pig) (၁၉၄၁)
35:33 Pimento တက္ကသိုလ်မှ Dover Boys (1942)
၄၄:၂၇ ၉၀ အံ့သြဖွယ်နေ့ (၁၉၅၆)
၅၂:၄၀ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်တွင်တစ်ရက် (၁၉၃၉)
၅၉:၂၇ အချိန်အခါတစ်ခု (၁၉၅၅)
1:07:03 ဘားများနှင့်အစင်းများ (၁၉၃၉)
1:14:17 Bosko the Doughboy (Bosko) (၁၉၃၁)
1:21:15 Bosko၊ Talk Ink Kid (ရှေ့ပြေး) (၁၉၂၉)
1:25:57 ယနေ့မည်သည့်ချည်နှောင်မှု (Bugs Bunny, Porky Pig, Elmer Fudd) (၁၉၄၂)
1:28:50 ပျောက်ဆုံးနေသော Hare (Bugs Bunny) (၁၉၄၂)
1:37:03 Nutzy Spy (Porky Pig) (၁၉၄၃)
1:44:38 ကွန်ဂိုဂျက်ဇ် (Bosko) (၁၉၃၀)
1:50:57 Crosby, Columbo နှင့် Vallee (၁၉၃၂)
1:58:10 Daffy Duck နှင့် Dinosaur (Daffy Duck) (၁၉၃၉)
2:05:56 Daffy ၏တောင်ပိုင်းထိတွေ့မှု (Daffy Duck) (၁၉၄၂)
2:13:28 Daffy The Commando (Daffy Duck) (၁၉၄၃)
2:20:51 Ding Dog Daddy (၁၉၄၂)
2:28:59 ကြမ်းတမ်းသည်မဟုတ်၊ (၁၉၅၇)
2:39:45 ညစာစားရန်ပိုးကောင် (၁၉၄၂)
2:46:35 Falling Hare (Bugs Bunny) (၁၉၄၃)
2:55:02 Farm Frolics (၁၉၄၁)
3:02:21 Fin 'N Catty (၁၉၄၃)
3:08:50 Foney ပုံပြင်များ (၁၉၄၂)
3:17:01 Fox Pop (၁၉၄၂)
3:24:47 Freddy the Freshman (၁၉၃၂)
3:31:37 Fresh Hare (Bugs Bunny) (၁၉၄၂)
3:39:16 ချမ်းသာသောအမြန် Porky (Porky Pig) (၁၉၃၇)
3:46:48 Gold Rush Daze (၁၉၃၉)
3:53:58 အပျော်တမ်းည (၁၉၃၉)
4:01:39 မင်းမှာရဲတိုက်တွေရှိပါသလား (၁၉၃၈)
4:09:04 ဝါသနာ Horse Laffs (၁၉၄၂)
4:15:10 Hollywood Capers (Beans the Cat) (၁၉၃၅)
4:21:52 Hop and Go (၁၉၄၃)
4:29:05 ငါချီတက်ပွဲကိုကြိုက်တယ် (၁၉၃၂)
4:35:54 ငါသဘောင်္သားဖြစ်ချင်တယ် (၁၉၃၇)
4:42:55 အဲဒါကငါ့ကိုထပ်တွေ့တယ်။ (၁၉၃၂)
4:50:02 Joe Glow, ပိုးစုန်းကြူး (၁၉၄၁)
4:56:33 အမျိုးသမီး၊ သင်၏မယ်ဒလင်တီးပါ။ (ပထမ Merrie သံစဉ်များ) (၁၉၃၁)
5:03:48 John Doughboy (Porky Pig) (၁၉၄၁) နှင့်တွေ့ဆုံပါ။
5:10:47 နှစ်ယောက်အတွက်လရောင် (၁၉၃၂)
5:17:37 မင်းအတွက်မှတ်စုများ (Porky Pig) (၁၉၃၇)
5:25:06 နောက်ထပ်တစ်ကြိမ် (၁၉၃၁)
5:32:07 ပုဂံမွန်း (Porky Pig) (၁၉၃၂)
5:39:02 Polka in Pigs (၁၉၄၃)
5:46:55 အစားအစာများကိုရိက္ခာအမှတ် (အမေရိကန်အစိုးရရုပ်ရှင်) (၁၉၄၃)
5:53:07 Porky Pig s Feat (Porky Pig) (၁၉၄၃)
6:01:45 Porky s Bear အချက်အလက် (Porky Pig) (၁၉၄၁)
6:08:51 Porky s Cafe (Porky Pig) (၁၉၄၂)
6:15:22 Porky's Garden (Porky Pig) (၁၉၃၇)
၆:၂၂:၃၆ Porky s Pooch (Porky Pig) (၁၉၄၁)
6:29:42 Porky's Pony (Porky Pig) (၁၉၄၁)
6:36:50 Porky s မီးရထား (Porky Pig) (၁၉၃၇)
6:44:04 Perst-O Change-O (၁၉၃၉)
6:51:04 Puss n 'Booty (၁၉၄၃)
6:58:27 ခေါင်းနီကလေး (၁၉၃၁)
7:05:08 Robin Hood သည်ကောင်းများဖြစ်စေသည် (၁၉၃၉)
၇:၁၂:၅၁ Robinson Crusoe Jr. (Porky Pig) (၁၉၄၁)
7:20:07 Rookie Revue (၁၉၄၁)
7:27:48 Happy Daffy (Daffy Duck) (၁၉၄၃)
7:35:44 Bathtub (Bosko) (၁၉၃၀)
7:43:36 ပြုံးပါ၊ Darn Ya၊ ပြုံးပါ။ (Foxy) (၁၉၃၁)
7:50:34 ဤမျှလောက်သာ (၁၉၄၉)
8:07:57 The Booze Hangs High (Bosko) (၁၉၃၀)
8:14:05 The Daffy Duckaroo (Daffy Duck) (၁၉၄၂)
8:21:51 The Ducktators (၁၉၄၂)
၈:၂၉:၃၂ ပဉ္စမကော်လံမောက် (၁၉၄၃)
8:37:01 The Haunted Mouse (၁၉၄၁)
၈:၄၄:၅၀ Henpecked Duck (၁၉၄၁)
8:52:28 Santy Claus နေထိုင်သော Shanty (၁၉၃၃)
8:59:39 The Sheepish Wolf (၁၉၄၂)
9:06:46 Timid Toreador (Porky Pig) (၁၉၄၀)
9:13:08 ညစာစားပွဲသို့ရောက်လာသော The Wabbit (Bugs Bunny) (၁၉၄၂)
၉:၂၁:၁၄ လူအုပ်ကြီးသုံးစု (၁၉၃၂)
9:28:12 Wackiki Wabbit (Bugs Bunny) (၁၉၄၃)
၉:၃၄:၅၄ Wacky Blackout (၁၉၄၂)
9:42:45 ငါတို့၊ တိရိစ္ဆာန်များအော်ဟစ်ကြသည်။ (၁၉၄၁) ခုနှစ်၊
9:51:35 Westward Whoa (၁၉၃၆)
9:58:52 တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ် (Porky Pig) (ဘယ်သူလဲ၊ ၁၉၄၁) ကဘယ်သူလဲ။
10:05:59 Yankee Doodle Daffy (Daffy Duck) (၁၉၄၃)
10:12:44 မင်းဘာလုပ်နေလဲမင်းမသိဘူး။ (Piggy) (၁၉၃၁)
Looney တီးလုံးများ (Looney Toons ဟုအများအားဖြင့်လွဲမှားသည်) နှင့် Merrie Melodies စီးရီးများတွင် bug bunny, daffy duck & pigy pig ကဲ့သို့ဇာတ်ကောင်များပါ ၀ င်သည်။ Looney တီးလုံးကာတွန်းများ၊ ရုပ်ရှင်များနှင့် Looney Tunes show အသစ်များသည်နှစ်ပေါင်းများစွာထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ တရားဝင် looney တီးလုံးများဖြင့်ထုတ်လုပ်သော looney တီးလုံးအပြည့်ဇာတ်လမ်းတွဲများကို DVD နှင့် TV တွင်ရနိုင်သည်။
Shaun the Sheep - Season3- Episodes 1-5 [30 MINS] @Hogie the Globehopper
Looney Tunes | Feat. Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig | Special Marathon6| Mel Blanc
Looney Tunes | Newly Remastered | Looney Tunes Ultra 4k | Bugs Bunny | Daffy Duck | Porky Pig
Looney Tunes | Feat. Bugs Bunny, Daffy Duck, Porky Pig | Special Marathon3| Mel Blanc